Siyaad Barre iyo Somaliland ha loo Garsooro!!
Siyaad Barre waxa lagu dhaliili jiray Afar waxyaabood, midda ugu horeysa waxay ahayd xeerkii Qoyska oo uu tobanka u dilay, wuxuu ahaa nin hanti wadaaga xoogga saaray oo dadkii Muslimiinta ahaa ku cadaadiyey in ay sidaa aqbalaan, Duulaankii xoogga badnaa ee uu ku qaaday Gobalada Waqooyi iyo Gobalada dhexe iyo waliba qaybo ka mid ah Gobalada Koonfureed, Beesha uu ka dhashay oo uu aad u hubeeyey intooda badan Saraakiil iyo madax kalaba ka dhigay, iyadoo sidaas ah dalkii ayuu dhisay, fartii Soomaaliga ayuu qoray oo aad looga faa’iideystay, Dugsiga hoose ilaa Jamaacad ayaa lacag la’aan lagu Baran jiray, Gurina ma uusan dhisan, Akoon dibadeedna ma uusan furan, xoolana ma uusan tabcan, Galbahaareyna Guri muuqda ma uusan ka dhisin taas oo lagu xaman jiray in uu ku dhashay, dagaalada markii isaga lagu bilaabeyna ayuu difaac xad dhaaf ah sameeyay, sidaa darteed dagaaladiisii difaac bay ahaayeen ayaa la dhihi kara, shisheeyuhuna ma adeegsan jirin Max’ed Siyaad ee isagaa wuxuu maago sameyn jiray intaa haddaan Max’ed Siyaad Barre uga baxo. Soomaaliland horta Soomaali bay kala gooyeen, intoodii wada goydayna Isaaq iyo Gadabiirsi baa meesha ku haray oo kuligood ah intii nabad sugida ahaan jirtay, waxaa caddaatay, si ay aqoonsi ku helaan in ay geed dheer iyo geed gaabana u fuuleen xitaa haddii Diinta looga baxayo, taas oo kaliftay in ninkii ahlo Diin ahba lala coloobo, wuxuuna arrinku noqday in inta jirdil lagu sameeyo Culumada ay sheegeen in ay falal argagixiso u qabteen ay u beec geeyaan Gaalada ay xiriirka la leeyihiin, Qabyaaladu waa Xumbo, Xumbana way dhacdaa, waxay ay qabteena lama arko, oo taariikhda u galay
Siyaad Barre…Soomaaliland Sagaashan Jeerow ka Saxnaay
Mutacalimiintiyo, Dadyahow maansada yaqaan.
Marqaati haddaad gashiin, Muslin rumana aad tihiin.
Maamulka Somaliland, Muslimkiyo Gaalada midkeebay jecel yihiin.
Muftiga Diin Faafiyiyo, Muhdiga kee jecel yihiin.
Gabdhaha tii maxajabaa, iyo meertada tee jecel yihiin.
Shabaabka Masaajidiyo, Meelaha kheryka leh fadhiya.
Oo Mareykanku neceb yihiin, iyo muqayil aan Diin laheyn, midkeebay jecel yihiin.
Ahdigii Nabi Muxamad iyo, Dastuur Gaal muhindisay, Midkeebay jecel yihiin.
Mareykan iyo Usaame, Midkeebay jecel yihiin
Muftiga Sheekh Muxamad iyo Mellas, Kee jecel yihiin.
Nin diinku ka muuqdo iyo, Muqayil kee jecel yihiin.
Mucatab aqoonsi iyo, Midnimo Soomaaliyeed, Midkeebay jecel yihiin.
Musxafkoo lagu dhaqmiyo, Mugdiga kee jecel yihiin.
Fooxlaha maansooda iyo Manhajkii Nabigayaga Midkeebay jecel yihiin.
Musanif xadrada dejiyo, Qur’aankaan muqadaska ah midkeebay jecel yihiin.
Janada Mowluhu baxshiyo, Manfaca gaaladu hayaan, Midkeebay jecel yihiin.
Macbuudku wuxuu na faray iyo Mabda’a Gaaladu dejeen, Midkeebay jecel yihiin.
Mareykan raaligeli iyo Musxafka manhaj ka dhigo, Midkeebay Jecel yihiin
In Qur’aanka lagu Xukuntameey Qadaf u haystaane!!
Qof kastoo Makhluuq ihi, markuu qalab sameynaayo.
Qoraal iyo wuxuu raaciyaa qaab ku dhaqankiisa,
Qaadirkuna qorshuu noo dejiyey, qalad la’aaneede.
Qur’aankaan intaad qaadatiin qaab ku dhaqankiisa.
Qowlkii Nabiga oo lagu fasiray qaanic ku ahaada.
Qudamadii Salafu Saalixuna qawlkey ku ijmacday.
Asna qaadashuu leeyahaye qaanic ku ahaada.
Wallee ineyd naan qiil kale heleyn qiyaaska mooyaane.
Qamriiste iyo Odey qanax ah bay xukun ka qaataane.
Qawaaniin samaawiya inama uma qashuucaane.
Hadba xeerki qoyskoo kaley qaabila hayaane.
Nin qur’aanka lagu xukuntameey qadaf u haystaane.
Khiyaar ma lihinoo amar Allaa qoorta noo surane.
Haddaan qaadan weynana kufribuu nagu qoraayaaye.
Qabuul dhahoo, qalbiga ka aqbaloo, laabta qabadsiiya.
Ama naar inuu idinku qubo qaanic ku ahaada.
Quud xalaala iyo waxays ag yaal qadadii Doorshaanka.
Qof walboow midkaad qaadatana waa laguu qoriye.
W/T: Abwaan Abshir Nuur Faarax (Abshir Bacadle)
Waxaa soo tabiyey : Amiin Yuusuf Khasaaro
E-Mail : amiinkhasaaro@myway.com